Waftigii DDSI oo lagu soo sagootiyay hilbo wada dhashiyo hayb qudhaynu-nahay. - Cakaara News
Waftigii DDSI oo lagu soo sagootiyay hilbo wada dhashiyo hayb qudhaynu-nahay.
Jigjiga(CN) Axad, 13ka December, 2015 Waxaa maanta dib ugu soo noqday xarunta deegaanka ee jigjiga wafti balaadhan oo uu hogaaminayay wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga DDSI mudane khadar cabdi ismaaciil. Waftigaasi oo maalmihii ugu dabeyay socdaal ku joogay xarunta somaliland ee hargaysa.
Waftigan ayaa saaka ka soo kicitimay xarunta somaliland ee hargaysa, iyada oo xaflada hadhimo sharafeed ah loogu sameeyay magaalada gabilay ee xarunta gobolka gabilay, xafladaasi hadhimo sharafeedka ah ayaa waxaa ku casuumay waftigan gudoomiyaha gobolka gabilay Mudane Mustafe Cabdi Ciise (Shiine).
Hadhimo sharafeedka ka dib ayaa waftigan waxa soo sagootiyeen qaarka mid ah golaha wasiirada somaliland oo ay ka mid yahay Wasiirka wasaarada Cadalada Somaliland Mudane Axmed Cadare, gudoomiyah Gobalka Gabilay Mudane Mustafe Cabdi Ciise(Shiine), iyo Agasimaha Guud Warfafinta Somaliland Mudane Maxamed Cilmi (ilkacase) kuwaaso oo soo gaadhsiiyay waftigan magaalada wajaale oo ee ku taala xuduuda labada dal.
Waftigan DDSI iyo masuuliyiintii soo sagootiday ayaa saxaafada warbixin ku siiyay magaalada wajaale kuwaasi oo si qoto dheer uga warbixiyay guulaha uu socdaalkii waftigu ku soo afmeermay.